Ahoana ny fomba filalaovana horonantsary YouTube amin'ny endrika 4k avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Google dia nanova tato anatin'ny herinandro vitsivitsy ny fomba fiasan'izy ioNy horonan-tsary amin'ny endrika 4k ary tsy azo lalaovina amin'ny browser OS X Safari amin'izao fotoana izao, Saingy tsy ny olona ihany no miaina amin'ny Mac amin'ny Safari, na dia ny browser aza no ahavitana tsara indrindra, zavatra misy izy ireo, noho izany mpampiasa maro izay, na eo aza ny fatiantoka mahazo azy, dia mampiasa azy io fa tsy mpitety hafa.
Ny antony lehibe mahatonga ny horonantsary YouTube amin'ny endrika 4k tsy azo lalaovina intsony ao Safari dia satria Google dia nanova ny codec video ampiasaina amin'ny playback, avy amin'ny H264, izay mifanaraka amin'ny Safari, ho an'ny VP9, ​​endrika loharano misokatra izay toa tsy ampidirin'i Apple ao amin'ny Safari.
Ny antony tsy itiavan'ny Apple hampihatra an'ity codec tsy fantatsika ity ary mety tsy ho hitantsika mihitsy izany, raha farany Apple dia manohy ao anatin'ny telo ambin'ny folo taonany ny tsy famelana ireo mpampiasa azy hamerina amin'ny laoniny ny horonantsary amin'ny endrika 4k avy amin'ny YouTube ao amin'ny tranokalan'izy ireo, vao mainka aza rehefa loharano misokatra izy io ary tsy mila mandoa olona vao afaka manampy an'io asa io. Aza adino fa io fetra io dia misy fiantraikany amin'ny horonan-tsary nakarina mandritra ny herinandro mahery kely fotsiny, azo jerena daholo ireo horonantsary teo aloha satria Google dia nampiasa ny codec H264, araka ny nolazaiko tetsy ambony. Mba hamaranana ny famolahana ny curl, io famerana io dia tsy misy fiantraikany amin'ny horonan-tsary tafiditra ao anaty pejin-tranonkala, araka ny hitantsika amin'ity sary manaraka ity amin'ilay sary ihany ao amin'ny fakana ambony.
Ka noho izany, ny fomba tokana ahafahana mitendry ny atiny YouTube amin'ny endrika 4k, ho an'ireo horonan-tsary rehetra nakarina hatramin'ny fiandohan'ny taona, dia mampiasa ireo mpitety tranonkala izay manolotra fanohanana an'ity codec video ity, dia i Chrome, Firefox ary Opera. Averina indray fa mbola tsy miraharaha ny filàna na olan'ny mpampiasa i Apple, satria manery antsika tsy maintsy mametraka browser hafa izy raha te hankafy ity atiny ity, zavatra izay tsy mitranga ohatra amin'ny Microsoft Edge ao amin'ny Windows 10, ny hany navigateur izay mamela anao hilalao votoaty amin'ny kalitaon'ny 4k avy any Netflix.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ahoana ny fomba filalaovana horonantsary YouTube amin'ny endrika 4k avy amin'ny Mac
Bob Burrough: "Nanova an'i Apple ho orinasa mankaleo i Tim Cook"